🛏️ Indawo yokuhlala | Vakashela i-Hultsfred
Njengombhede wesipiliyoni esihle!
umphetho » 🛏️ Indawo yokuhlala
Ihhotela, ihostela, i-cottage, i-B & B noma ikanise - noma ngabe ufuna ukuphumuza ikhanda kuphi futhi kanjani ebusuku, kunezindawo zokuhlala unyaka wonke ezingahambisana nokunambitheka kwakho nokuthanda kwakho. Ziphathe ngempelasonto kanokusho ngezinga eliphakeme kakhulu noma ubeke itende kwelinye lamakamu ethu amahle noma ngaphandle kwendalo - nathi ungalala kahle noma yini oyikhethayo!
Ngaphandle nje kwenkaba ye-Målilla kune-Villa Karllösa. Indlu yezihambi itholakala phakathi nemvelo endaweni yehlathi elihle. Inikeza amakamelo anethezekile nesimanje, asanda kulungiswa
I-Fiskebodarna - IStora Hammarsjöområdet
IFiskebodarna - IStora Hammarsjöområdet itholakala cishe kumakhilomitha ayi-10 entshonalanga neHultsfred, cishe imizuzu engama-25 ukuya eVimmerby. Le ndawo yindawo yokongiwa kwemvelo nezindawo zokudoba okubandakanya cishe ama-30
IStenkulla - IStora Hammarsjöområdet
IStenkulla yindlu yomndeni enokubukwa kwechibi endaweni enhle yemvelo. Cishe ngamakhilomitha ayi-10 entshonalanga neHultsfred yindawo yokulondolozwa kwemvelo kanye nezokudoba iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlingiswa wasehlane
I-Färgkulla - IStora Hammarsjöområdet
Ikotishi lomndeni elinokubukwa kwechibi endaweni enhle yemvelo. Cishe ngamakhilomitha ayi-10 entshonalanga neHultsfred yindawo yokulondolozwa kwemvelo kanye nezokudoba iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlingiswa wasehlane omemayo
ISjöåsen - IStora Hammarsjöområdet
Ikotishi lomndeni elinendawo ethambekele echibini kufaka phakathi i-jetty nesikebhe. Cishe ngamakhilomitha ayi-10 entshonalanga neHultsfred yindawo yokulondolozwa kwemvelo kanye nezokudoba - iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlingiswa wasehlane
Ithole leketanga iphimbo
Indawo yokupaka engadini yeKalvkätte enamanzi, i-WC kanye nendawo yokulahla udoti.
Amakamelo asebusuku kaHagadal
Amakamelo asebusuku anesikhala sabantu abane. Amakotishi amancane wamamitha-skwele ayi-10 alungele ukuhlala ubusuku bonke. Amakotishi atholakala endaweni ebiyelwe ngemuva kwalesi sikhungo. Eyodwa
IHotell Dacke yihhotela lomndeni elisenkabeni yeVirserum. Eduze kwehhotela kunendawo yokupaka izimoto enkulu. Ukusondela kuwo womabili amahlathi nechibi. Indawo yokudlela yasehhotela
Ngumculo ofake uHultfred ebalazweni futhi akukho ndawo eHultfred umculo ojule kakhulu ezindongeni njengaseHotell Hulingen. Thina
Indawo yokupaka iMarlilla Hembygdsparks
Indawo yokupaka iMarlilla Hembygdsparks. Epaki elikhulu lezimoto eMålilla hembygdspark kunezindawo zokupaka izindlwana zamahhashi nezindlu zezimoto.
Khona kanye enkabeni eduze kwechibi kanye nomgwaqo ongaphandle, isiteshi sinezindawo zokupaka ezine. Kumile ukuma ubusuku obubodwa. Uma ufuna insizakalo ye-pitch, sicela ubheke ku-Camping Hultsfred
Ihostela maphakathi neHultsfed. Imibhede engama-25 emakamelweni aphindwe kabili, ezindlini zokulala nakumakamelo omndeni. Ikhishi elisha lesimanje lokuziphilisa ngegumbi lokudlela elihlanganyelwe. Ishawa esabiwe, iWC, indlu yangasese ekhubazekile kanye
I-Målilla Hotel & Indawo yokudlela
IMarlilla Hotell yihhotela elincane elinendawo yokudlela. Isidlo sasemini sanamuhla, i-la carte, i-pizza namasaladi kuyaphakwa lapha. Indawo yokudlela inamalungelo agcwele. Bangu-40
I-st-stugan - IStora Hammarsjöområdet
Qasha ikotishi esiqhingini sakho. Ilungele wena ofuna ukuthula nokuthula. Phila esiqhingini sakho uqobo ekotishi elincane futhi
IHammaråsen - IStora Hammarsjöområdet
Ikotishi lomndeni elinendawo ethambekele echibini kufaka phakathi indiza nesikebhe Cishe ngamakhilomitha ayi-10 entshonalanga neHultsfred yindawo yokulondolozwa kwemvelo kanye nezokudoba iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlingiswa wasehlane omemayo
Lapha uhlala ngokushibhile nangokunethezeka, eduze kwabo bobabili uSmalspåret, Umhlaba ka-Astrid Lindgren, iVirserums Konsthall neminye imisebenzi eminingi. Indawo yokuhlala ene
Lapha uhlala ngombono omuhle weLake Hulingen! Usondele ebhishi, izinsiza kanye nekhefi. Ukuhamba ibanga elingamakhilomitha amabili kulo mgwaqo kuthatha
Ikhempu yemvelo kaHesjön
INyakatho ye-Målilla iyikhempu yemvelo ka-Hesjön. Kunezindawo zokupaka izimoto zamakharavani kanye nemizi engomahamba nendlwana, kanye nendawo ehlukile yetende. Ukupaka ukukhubazeka. Ukusuka endaweni yokupaka izimoto kunomgwaqo owenzeka ngokwezifiso ezansi
Lönneberga amatende wemvelo
Izindawo zokupaka izindlwana zamakharavani, izindlu zezimoto kanye nethuba lokukhempa Lapha kukhona indlu yangasese ekhubazekile enamanzi ashisayo negumbi lokushintsha. Indawo ye-Barbecue futhi cishe amamitha ayi-900 ngaphezulu
Palace Ihhotela & Indawo yokudlela
Leli hhotela elithokomele nelisebenza emndenini lingamamitha angama-50 kuphela ukusuka eHultsfred Train Station eSmåland. Kusuka ehhotela ubona iLake Hulingen eseduzane. Zonke ngazinye
Ikamu lezemvelo likaStora Hammarsjön
Itholakala kahle endaweni yokongiwa kwemvelo nezindawo zokudoba i-Stora Hammarsjön Ngaphandle nje kwe-Hultsfred indawo yokongiwa kwemvelo nezindawo zokudoba ka-Stora Hammarsjön. E-Stora Hammarsjön, cishe amakhilomitha ayi-10, kukhona elula
Ihostela iLönneberga itholakala emaphethelweni e-Emil Lönneberga. Ihostela laseLönneberga linenkonzo enhle, okuhlangenwe nakho okuhle kwemvelo nemisebenzi yayo yonke iminyaka. Ihostela linemibhede engama-55. Amakamelo
Engxenyeni esenyakatho yeHultfred kukhona ipulazi laseKloster. Emaphandleni kodwa ngaphakathi kwebanga lokuhamba uye esitolo, indawo yokubhukuda, ithrekhi encane nezindawo ezinhle zokuhamba. Lapha ungaqasha igumbi, ifulethi